တေးဂီတ : အတူတူ
331 September 7, 2015
တေးရေး – ညီအောင် တေးဆို – ညီအောင် ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ “အတူတူ” “တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နေရောင်ကြည့်ခြင်း တို့အတူ အမှောင်တွေဖယ်ရှားပြီး အလင်းရောင်တွေထွန်းညှိပြီး ကမ္ဘာမြေငြိမ်းချမ်းရေး ပန်းတိုင်ခရီးအတွက် အတူတူ လက်တွဲလိုက်ကြမယ်” တေးရေး/တေးဆို-ညီအောင် ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ “အတူတူ” ဆိုတဲ့သီချင်းကို ခံစားကြည့်ရူနိုင်ဖို့ ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တေးဂီတ : မြေမြှုပ်မိုင်း
227 September 7, 2015
တေးရေး – စောဖိုးခွား တေးဆို – စောဖိုးခွား ကိုယ်တိုင်ရေးစပ် သီဆိုထားတဲ့ “မြေမြှုပ်မိုင်း” ဒီသီချင်းကတော့ မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ကြောင့်ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခခံစားရတဲ့ ပြည်သူတွေ နစ်နာသူတွေအကြောင်းကို ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ဒီသီချင်းကို ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
553 August 20, 2015
MTV တေးဂီတအစီအစဉ် : တစ်ခုခုတော့ပြောပါ တေးရေး – ဘန်နီဖြိုး တေးဆို – ကာကာ၊ ထိန်ဝင်း သီဆိုထားတဲ့ “တစ်ခုခုတော့ပြောပါ” ဒီသီချင်းမှာတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး Music မြူးမြူးလေးနဲ့ နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံ – သီတာ (DVB)
အဆုံးသတ်တစ်ခုရဲ့ နိဒါန်း (တေးဂီတအစီအစဉ်)
401 August 20, 2015
MTV တေးဂီတအစီအစဉ် : အဆုံးသတ်တစ်ခုရဲ့ နိဒါန်း တေးရေး – ကိုမြအေး တေးဆို – နိူးဝေ သီဆိုထားတဲ့ “အဆုံးသတ် တစ်ခုရဲ့နိဒါန်း” ဘယ်လိုသီချင်းစာသားလေးတွေနဲ့ ဖန်တီးပုံဖော် သီဆိုထားလဲဆိုတာကို ခံစားနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ တေးဂီတအစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံ – သီတာ (DVB)
လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ရှိသင့်တယ် (တေးဂီတအစီအစဉ်)
451 August 20, 2015
MTV တေးဂီတအစီအစဉ် : လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ရှိသင့်တယ် တေးဆို – လင်းလင်း သီဆိုထားတဲ့ “လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ရှိသင့်တယ်” “မတရားမှန်းသိပါလျက်နဲ့” “ပြောခွင့်မရတဲ့ ဘ၀တွေ” “လူဖြစ်ရှုံးနေတဲ့…” သီချင်းကို ကိုယ်တိုင်ခံစားနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ တေးဂီတအစီအစဉ်မှာ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံ – သီတာ (DVB)
365 August 19, 2015
MTV တေးဂီတအစီအစဉ် : တို့ရဲ့ပြည်မြန်မာပြည် တေးရေး/တေးဆို – ဈာန်လင်း ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ “တို့ရဲ့ပြည် မြန်မာပြည်” “မြန်မာပြည်မှာရဲ့အလှအပတွေ တိုင်းရင်းသားများစုစုစည်းစည်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေညီညီညာညာနဲ့ ဘယ်သူခွဲခွဲ အမြဲစည်းလုံးမည် တို့ရဲ့ပြည်မြန်မာပြည်” သီချင်းစာသားလှလှလေးတွေနဲ့ ဖော်ကျုးသီဆိုတားတဲ့သီချင်းကို အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ တေးဂီတအစီအစဉ်မှာ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံ – သီတာ (DVB)
248 August 19, 2015
MTV တေးဂီတအစီအစဉ် : မျက်ရည်များနဲ့မိခင် တေးရေး – SNO တေးဆို – SNO ၊ ညီအောင် သီဆိုထားတဲ့ “မျက်ရည်များနဲ့မိခင်” ဒီသီချင်းကို အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ တေးဂီတအစီအစဉ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရန်အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံ – သီတာ (DVB)
489 August 19, 2015
MTV တေးဂီတအစီအစဉ် : လူငယ်စံ တေးရေး – မန္တလေးသားသူရ တေးဆို – အိချော သီဆိုထားတဲ့ “လူငယ်စံ” ဒီသီချင်းကတော့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အနာဂတ်လူငယ်များအတွက် ဘယ်လိုမျိုးစံထားသင့်တဲ့သူမျိုးလဲဆိုတာကို ဒီသီချင်းမှာ နားဆင်ရင် ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ရန် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံ – သီတာ (DVB)
အဆိုတော် အယ်မိုး၏ မျှော်လင့်ခြင်းကလေးငယ်
211 June 18, 2015
တေးရေး-အနဒဗ တေးဆို-အယ်လ်မိုး သီဆိုထားတဲ့ “မျှော်လင့်ခြင်းကလေးငယ်” “အမုန်းတွေ ငြိမ်းအေးပြီး” “ကလေးငယ်အနာဂတ်အရေး စဉ်းစားစေချင်” ဘယ်လိုမျိုးရေးစပ်သီဆိုထားလဲ ဆိုတာကို 05-06-2015 သောကြာနေ့မှာ ကြည့်ရူခံစားနိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
The post ကာတွန်း – ဆွေသား appeared first on DVB.
နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်က အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ဟု အေအိုင်အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ဟာ အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ ဘိုကိုဟာရမ်တွေကို တိုက်ထုတ်စဉ်အတွင်း အရပ်သားတွေအပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေ၊ အဓမ္မပြုကျင့်တာတွေနဲ့ သတ်ဖြတ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့[...] The post နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်က အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ဟု အေအိုင်အဖွဲ့ ထုတ်ပြန် appeared first on DVB.
အင်းလေလံပေးမှု မကျေနပ်၍ ရေလုပ်သား ၄၀၀ ခန့် ဆန္ဒပြ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ခြမ်းမြို့နယ် ၅ မြို့နယ်က ရေလုပ်သား ၄၀၀ လောက်က ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဥပဒေနဲ့[...] The post အင်းလေလံပေးမှု မကျေနပ်၍ ရေလုပ်သား ၄၀၀ ခန့် ဆန္ဒပြ appeared first on DVB.
လစ်ဗျားနိုင်ငံ ဘန်ဂါဇီမြို့လယ်တွင် ကားဗုံးပေါက်ကွဲ၊ ၇ ဦး သေဆုံး
လစ်ဗျားနိုင်ငံ ဘန်ဂါဇီမြို့လယ်က လူစည်ကားရာ လမ်းမတခုမှာ မေ ၂၄ ရက်ညက ကားဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့လို့ အနည်းဆုံး လူ[...] The post လစ်ဗျားနိုင်ငံ ဘန်ဂါဇီမြို့လယ်တွင် ကားဗုံးပေါက်ကွဲ၊ ၇ ဦး သေဆုံး appeared first on DVB.
အာဂျင်တီးနားတွင် နှစ် ၉၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ရုပ်ရှင်ရုံ ပြိုကျ၊ ၃ ဦး သေဆုံး
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ တူကူမန်မြို့မှာ မေ ၂၃ ရက်နေ့က နှစ် ၉၀ ကျော် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတရုံ[...] The post အာဂျင်တီးနားတွင် နှစ် ၉၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ရုပ်ရှင်ရုံ ပြိုကျ၊ ၃ ဦး သေဆုံး appeared first on DVB.
© 2018 DVB TV News.